Odayaal dhaqameed gaarsiiyay Maleeshiyada Qubuura Galeenka in Guriceel ay go’doon ka tahay 3 jiho, weerarna uu kusoo socdo. | Halganka Online
Acmaasha ugu fadliga badan ee la qabto bisha barakeysan ee ramadaan
Beesha Luwaay/Mirifle oo hub fara badan ku wareejisey Xarakada Shabaabul Mujaahidiin gobalka Bay iyo Bakool.
Beesha deegaanka Iidaale Gobalka Bay oo Hubkii ugu tirada badnaa ku wareejisay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Walaalkeen Sheikh Mohamed Umal weydiiya wadaad diintii laga bililiqaystay ??
Odayaal dhaqameed gaarsiiyay Maleeshiyada Qubuura Galeenka in Guriceel ay go’doon ka tahay 3 jiho, weerarna uu kusoo socdo.
Posted on Janaayo 25, 2010 by halganka
Qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka degmada Guricee ee dhawaan xiriirka lasoo sameeyay Taliska Cidamada Shabaabul Mujaahidin ee ku sugan deegaanka Warxoolo ayaa gaarsiiyay Maleeshiyada Qubuura Galeenka ee degmada Guriceel in magaalado 3 jiho ay go’doon ka tahay isla markaana dagaal uu kusoo wajahan yahay.
Odayaasha dhaqanka ayaa ka codsaday Maleeshiyada in ay badbaadiyaan dadka deegaanka isla markaana ay magaalada banaanka kaga baxaan si dibadda ay ugula soo dagaalamaan Ciidamada kusoo jeeda, hayeeshee qaar kamid ah odayaasha ayaa loogu hanjabay dil iyadoona lagu eedeeyay gacan saar in ay la leeyihin dhinacyo ay isku heyb yihiin oo kamid ah Madaxda Al-Shabaab.
Markii Odayaashu ay warkaasi gaarsiiyeen Maleeshiyada iyo dadka waxgaradka ayaa mar qura xaaladdu faraha ka baxday iyadoona ay Maleeshiyadu xalay bandow kusoo rogeen magaalada oo ay mamnuuceen dadka in ay dhaq dhaqaaqaan.
Dhibaatada ugu badan ee ka jirta magaalada Guriceel ayaa heysata dadka safarka ah ee soo mara siina mara magaaladaasi kuwaasi oo la kulma su’aalo kala duwan oo lamid ah kuwii ay Ciidanka Tigreedu dadka weydiin jireen, iyadoona ciddii aan la aqoosan oo dhalinyaro ah ay ku harowsadeen ”Itoobiyaanka dagaalkii lalal galay maka qeybgashay”.
Ilo wareedyo kamid ah Taliska Ciidanka Al-Shabaab Al-Mujaahidin ee Warxoolo ayaa diiday in la sheego qaabka ay go’doonka ugu jirto magaalada Guriceel balse waxay ku gaabsadeen in qorshe dagaal oo ka dhan ah magaalada la degay isla markaana uu hirgalay.
« Xiisad ka oogan xuduudka Wilaayada Islaamiga ah ee Gedo ay la wadaagto Kenya iyo Ciidamada Al-Shabaab iyo kuwa Kenya oo dagaal ku sigtay. Ciidamadii ka baxay Baladweyne ee Shabaabul Mujaahidin iyo Xisbul Islaam oo xalay dhagaha u laabay Haraadigii Maleeshiyada Qubuura Galeenka. »